Airbnb माथि होटलमा बसेर पैसा बचत गर्न शीर्ष अमेरिकी स्थानहरू
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज » Airbnb माथि होटलमा बसेर पैसा बचत गर्न शीर्ष अमेरिकी स्थानहरू
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • हवाई ताजा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • मान्छे • रिसोर्ट्स • किनमेल • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
Airbnb माथि होटलमा बसेर पैसा बचत गर्न शीर्ष अमेरिकी स्थानहरू।
छुट्टी भाडामा लिने साइटहरूले कथाहरू सुनाउनको लागि अद्वितीय रहन प्रस्ताव गर्दछ, र होस्टहरूलाई उनीहरू शहर बाहिर हुँदा केही अतिरिक्त नगद बनाउन दिन्छन्, तर के यो अझै पनि सस्तो छ?
Waikiki बीच नजिकैको डबल होटल कोठाको औसत रातको मूल्य मात्र $74 हो, जबकि यस्तै Airbnb बस्नको लागि, यसले तपाइँलाई $ 271 खर्च गर्नेछ।
ग्रान्ड टेटन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रातभर बस्नको लागि सामान्यतया होटेलमा $ 231 खर्च हुनेछ तर एयरबीएनबीमा $ 847।
सबैजनालाई एक पटक एक पटक विश्राम चाहिन्छ, र छुट्टीहरू आराम गर्न र नयाँ सम्झनाहरू बनाउनको लागि एक निश्चित-आगो तरिका हो। यद्यपि, तपाईंले महसुस गर्नु अघि बिदाको लागतहरू थप्न सक्छन् र हामीमध्ये धेरैले कोठामा बजेट उडाउनुको सट्टा जीवन परिवर्तन गर्ने घटनाहरू, स्मृति चिन्हहरू र विदेशी खानाहरूमा स्प्लर्ज गर्नेछौं।
तपाईको बजेटको लागि कुन प्रकारको आवास उत्तम छ भनेर जान्न गाह्रो छ। Airbnb लन्डन देखि हङकङ सम्म लगभग हरेक शहर मा उपलब्ध संग, यो भाडा मा पहिले भन्दा सजिलो छ।
उद्योग विशेषज्ञहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वभरका 80 शीर्ष यात्रा गन्तव्यहरूमा Airbnb सूचीकरण र होटेलहरूको मूल्यहरू विश्लेषण गरे, यो प्रकट गर्नको लागि कि बस्नको लागि बढी बजेट-अनुकूल तरिका हो।
1. वैकिकी बीच, हवाई
प्रतिशत बचत: 72.86%
यो आश्चर्यजनक हवाईयन स्वर्ग ओआहु टापुको होनोलुलु छिमेक भित्र बसेको छ। यसको सेतो-बालुवा समुद्र तटहरू र शान्त गहिरो निलो महासागरहरूको लागि प्रसिद्ध, Waikiki हरेक वर्ष हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ र टापुको मुख्य छुट्टी क्षेत्र हो।
यद्यपि यस क्षेत्रमा 300 भन्दा बढी Airbnb स्थानहरू छन्, होटल र रिसोर्टहरू तटवर्ती क्षेत्रमा हावी छन्। तिनीहरूको मूल्यहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा भिन्न हुन्छन् र पोखरी र स्पा जस्ता विलासिताहरूमा पहुँचको मतलब तपाईंले धेरै तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
अझै पनि नजिकै एक डबल होटल कोठा को औसत रात को मूल्य वैकिकी बीच मात्र $74 छ, जबकि समान Airbnb बस्नको लागि, यसले तपाइँलाई $ 271 खर्च गर्नेछ! 72.9% मार्कअपको लागि, छुट्टीमा जानेहरूले परम्परागत विकल्प छनौट गर्नु राम्रो हुनेछ।
2. ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क, वायोमिंग
प्रतिशत बचत: 72.79%
जब तपाइँ संयुक्त राज्यको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, येलोस्टोन, योसेमाइट वा सियोनको बारेमा सोच्नुहुन्छ, सायद दिमागमा वसन्त आउँछ। यद्यपि, उत्तिकै मनमोहक परिदृश्य ग्रैंड टेटन राष्ट्रिय निकुञ्ज साहसिक-खोजी पर्यटकहरूको भीडलाई आकर्षित गर्दछ।